Ministry of Rail Transportation ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး
Trips and Time Table
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများသို့
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၃)နှင့်(၂၅)ရက်များတွင် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အဆိုပြုလွှာပုံစံများပေးအပ်ခြင်း၊ အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မူဝါဒစည်းကမ်းများအား ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံခဲ့သော ကုမ္ပဏီများအနက် အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီများနှင့် အချက်အလက် မပြည့်စုံသော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် အဆိုပြုလွှာများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၇ ရက်နောက်ဆုံးထား၍ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးရုံးချုပ် နေပြည်တော်သို့ ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ရန် အကြောင်းကြားပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်နေ့မှစ၍ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရေးဆောင်ရွက်မှုအဆင့်ဆင့်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၁၄.၆.၂၀၁၃ အထိ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အဆိုပြုလွှာရောက်ရှိလာသောကုမ္ပဏီများ
Ryobi (ဂျပန်) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း
၂။ Busan (တောင်ကိုရီးယား) ခရီးသည်၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Bus Terminal တည်ဆောက်ခြင်း၊
၃။ CJ GLS (တောင်ကိုရီးယား)
၄။ FGRS (ရန်ကုန်) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Bus Terminal တည်ဆောက်ခြင်း၊
၅။ စန်းရောင်နီ(ရန်ကုန်) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Bus Terminal တည်ဆောက်ခြင်း၊
၆။ မိုးသောက်နှင်း (မန္တလေး) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ယာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Bus Terminal တည်ဆောက်ခြင်း၊
၇။ မြင့်မိသားစု(ရန်ကုန်) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Bus Terminal တည်ဆောက်ခြင်း၊
၈။ YCTT Solution (ရန်ကုန်) ခရီးသည်ပို့ဆောင်ခြင်း၊
ပထမအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုးမြင့် ၊ အမှတ်(၆)မဲဆန္ဒနယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၏ မေးမြန်းချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၏ ယာဉ်ငှားရမ်းခ အခြေခံစံနှုန်း များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
၁။ မြေပြန့်ဒေသ လမ်းခရီးအလိုက် သာမန်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ (အစိုးရ)
တန်မိုင်နှုန်း (တစ်တန် x တစ်မိုင်)
၃။ အထူးကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ (အစိုးရ/သမ)
အခြေခံနှုန်းထားအပေါ် ၁၅၀ %
(ဓါတ်မြေသြဇာ၊ ဘိလပ်မြေ၊ ကျောက်၊ တိရိစ္ဆာန်၊ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ ငပိ)
အခြေခံနှုန်းထားအပေါ် ၅၀ %
သံကွင်း၊ သံပိုင်း၊ တံတားပေါင်များ (ပေရှည်)
အခြေခံနှုန်းထားအပေါ် ၁၀၀ %
၃။ ပုဂ္ဂလိက ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများ
(က) တောင်ပေါ်မြေပြန့်ငှားရမ်းရာတွင် ဌာနခွဲ၏ လစဉ်အခြေခံစံနှုန်းအပေါ်မူတည်၍ ခရီးစဉ်အလိုက် တွက်ချက်ရရှိသော ယာဉ်ငှားရမ်းခနှင့် တန်မိုင်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ရရှိသော သင့်ငွေ ၂ ရပ်အနက် များရာနှုန်းထားဖြင့် တွက်ချက်တောင်းခံပါမည်။
(ခ) အထူးကုန်ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ရပါက တန်မိုင်နှုန်းထားဖြင့် အခြေခံတွက်ချက်ထားသော အထူးကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခနှုန်းထားနှင့် ဌာနခွဲ၏ အခြေခံ စံနှုန်းပေါ်မူတည်၍ တွက်ချက်ထားသော ကျသင့်ငွေ ၂ ရပ်အနက် များရာနှုန်းထားဖြင့် တောင်းခံပါမည်။
၅။ ကုန်တင်ယာဉ် (ထရက်တာ၊ ထရေလာ) ငှားရမ်းခနှုန်းထား (အစိုးရ/သမ/ပုဂ္ဂလိက)
ကုန်တင်ယာဉ် ငှားရမ်းခနှုန်းထားမှာ အပိုဒ် (၁)(၂)(၃)ပါ တီအီးယာဉ်(၁)စီး ငှားရမ်းခ နှုန်းထား၏ (၂)ဆဖြစ်သည်။
၆။ ဆီသယ်ယာဉ် ငှားရမ်းခနှုန်းထား (အစိုးရ/သမ/ပုဂ္ဂလိက)
ဆီသယ်ယာဉ်ငှားရမ်းခနှုန်းထားမှာ အပိုဒ် (၁)(၂)ပါ တီအီးယာဉ်(၁)စီး ငှားရမ်းခနှုန်းထား၏ (၂)ဆ ဖြစ်သည်၊ အပိုဒ်(၄)(က)ပါ အခြေခံ နှုန်းထားအပေါ် ၁၅၀ % ထပ်ဆောင်းတောင်းခံခြင်းမပြုပါ။
(က) တစ်ရက်နှုန်း (ငှားရမ်းသူဆီဖြင့်) ၄၀၀၀၀ ကျပ်
(ခ) အလုပ်ချိန် ၄ နာရီထက်မပိုသော ၁ ရက်နှုန်း (ငှားရမ်းသူဆီဖြင့်) ၂၀၀၀၀ ကျပ်
တန်မိုင်နှုန်းဖြင့် ငှားရမ်းရာတွင် ကုန်ပါခရီးစဉ်အတွက်သာ ပို့ဆောင်ခကို တောင်းခံမည် ဖြစ်ပါသည်၊ သို့ရာတွင် အသွားခရီးစဉ် (သို့မဟုတ်) အပြန်ခရီး ကုန်လွတ်ဖြစ်လျှင် ကုန်လွတ်ခအဖြစ် ကုန်ပါ ခရီးစဉ်ပို့ဆောင်ခ၏ ၅၀% ထပ်ဆောင်း တောင်းခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
တင်တောင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းကို ကုန်ပွ၊ ကုန်ကျစ်မခွဲခြားဘဲ တစ်ပြေးညီ ယာဉ်ဝန်ချိန်ပြည့် (၇)တန်နှုန်းဖြင့် တောင်းခံပါမည်၊ အကယ်၍ ယာဉ်ဝန်ချိန်ပြည့်ထက် ပိုမိုတင်ဆောင်ရလျှင် အမှန်တင်ဆောင်သည့် ကုန်အလေးချိန်အတွက် တောင်းခံပါမည်၊ တောင်ပေါ်ဒေသ၌ အခြေအနေအရ ယာဉ်ဝန်ချိန်ပြည့်ထက် ကုန်ကို လျော့ပေါ့ တင်ဆောင်ရသော်လည်း ပို့ဆောင်ခကို ယာဉ်ဝန်ချိန်ပြည့်ဖြင့် တောင်းခံပါမည်။
(ဂ) ညအိပ်စောင့်ဆိုင်းရသည့်အခါ တစ်ညအိပ်စောင့်ဆိုင်းရတိုင်း တစ်ရက်အတွင်း ဆီမပေး ၅၀၀၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ညအိပ်စောင့်ဆိုင်းခ တောင်းခံပါမည်။
(ဃ) လမ်းဖြတ်သန်းခ၊ တံတားနှင့်ဇက်ကူးခ၊ ယာဉ်ရပ်နားခများကို ယာဉ်ငှားရမ်းသူမှ ကျခံရန် ဖြစ်သည်၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ကျခံပေးခဲ့ရလျှင် ပို့ဆောင်ခ တောင်းသည့်အခါ ထည့်သွင်း တောင်းခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
(င) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးက သတ်မှတ်ထားသော မြေပြန့်နှင့်တောင်ပေါ်ဒေသ ပို့ဆောင်ခ နှုန်းထားများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ရပ်က သတ်မှတ်သော ပို့ဆောင်ခနှုန်းထား(၂)ရပ်အနက် များရာကို သတ်မှတ်တောင်းခံမည် ဖြစ်ပါသည်။
(စ) အထက်ပါ ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများသည် အခြေခံနှုန်းထားများဖြစ်ပါသည်၊ အထက်ပါ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများရှိ ဌာနခွဲတစ်ခုခုမှ မိမိပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် နယ်မြေဒေသ သဘာဝပေါ်မူတည်၍ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်စေရန်အတွက် ပို့ဆောင်ခ နှုန်းထားများကို ပြုပြင်သတ်မှတ် ကောက်ခံခွင့်ပြုရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး(ရုံးချုပ်)သို့ အခါအားလျော်စွာ တင်ပြချက်ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ဌာနခွဲတစ်ခုမှ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း၊ ကုန်းလမ်းနှင့်ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ ပြုပြင်သတ်မှတ်ကောက်ခံ လိုသော ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများကို အတည်ပြုပေးရန် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး(ရုံးချုပ်)သို့ တင်ပြချက်ရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး (ရုံးချုပ်)က ကောက်ခံရန် အတည်ပြုပါက တရားဝင်ပို့ဆောင်ခ နှုန်းထားများအဖြစ် သတ်မှတ်ကောက်ခံပါမည်။
1. Road Transport was originally established by the Defence Services Institute in 1959 as the City Transport Company.
2. In 1961, the City Transport Company was placed under the Burma Economic Development Corporation.
3. In 1963, it was brought under public ownership and renamed as Road Transport Board.
4. In 1972, Road Transport Board was reconstituted as Road Transport Corporation.
5. In 1989, the word 'Corporation' was dropped and the organization was called 'Road Transport' according to the marked oriented system.
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးဌာန အဝေးပြေးခရီးစဉ်များ
နေ့ / အချိန
အခန်း(၄) ပထပ် ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကြီးဝင်း
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်
ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ(၃)ခု ရွေးချယ်ခံရ
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ပထမအဆင့်အဖြစ် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ(၂)ခုနှင့် ပြည်ပ ကုမ္ပဏီ(၁)ခုတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ(၂)ခုမှာ Forever Green Right Services Co., Ltd. နှင့် မိုးသောက်နှင်း ကုမ္ပဏီ လီမိတက် တို့ ဖြစ်ပြီး ပြည်ပကုမ္ပဏီမှာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှ Busan Express Bus Terminal Co., Ltd. တို့ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ရှိသည့် ဆွေးနွေးဆဲကုမ္ပဏီ များကိုလည်း ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်အပေါ်အခြေခံ၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးစိစစ်ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မ၍ အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော် ( ဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၄၀၅၀၃၇၊ ၄၀၅၄၁၂ ) တို့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် အကျိုးတူ ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စိစစ်ရေးကော်မတီမှ တွေ့ဆုံခြင်း
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၃)(၂၅)ရက်များတွင် ရထားပို့ဆောင်ရေးမှတာဝန်ရှိသူများသည် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကျိုးတူလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုလာ သော ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီ(၈)ခု၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီ(၅)ခု၊ စုစုပေါင်း ကုမ္ပဏီ(၁၃)ခုတို့ဖြင့် တွေ့ဆုံ၍ ၀န်ကြီးဌာန၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာသော လုပ်ငန်းများဖြစ်စေရန် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် JV လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီ(၁၀)ခု၊ BOT ဆောင်ရွက်မည့် ကုမ္ပဏီ(၂)ခု နှင့် ချေးငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်လိုသည့် ကုမ္ပဏီ(၁)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး၊ ယာဉ်ပြင်အလုပ်ရုံများ၊ အဆင့်မီယာဉ်မောင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း အပါအ၀င် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဝန်ထမ်းများအား အကျိုးတူလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ပေးအပ်နိုင်ရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
1. Ensuring free competition and preventing the development of monopoly situations and adequate safety.
2. Providing transport services dutifully for the safeguard of the sovereignty of the state, border areas development, state-run development projects, state-sponsored ceremonies and other transport services required by the state.
3. Participation on domestic production of motor vehicles, spare parts and major-repair of our own-fleet.
© 2009 Ministry of Rail Transportation. All rights reserved.